Monday March 04, 2019 - 16:21:34 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wadanka Aljazaa'ir ee dhaca waqooyiga qaaradda Afrika waxaa cirka iskusii shareeray dibad baxyada lagu doonayo in cabdi casiis botafaliiqa madaxweynaha dabadhilifka wadankaas looga reebo doorashooyinka madaxtinimo ee dhowaan dhici doona.
Wararka ka imaanaya Aljazaa'ir ayaa sheegaya in kumanaan kun oo qof ay taaganyihiin waddooyinka waxayna dhigayaan dibad baxyo ka dhan ah hoggaamiyahan dabadhilifka ah, dibad baxyada ayaa sii xoogeystay saacado yar kadib markii madaxa ololaha botafaliiqa uu guddiga doorashooyinka si rasmi ah ugu gudbiyay warqadaha aqoonsiga musharaxnimada botafaliiqa.
Cabdi Qani Zaclaan oo mas'uulka uga ah botafaliiqa doorashada ayaa telefeshinka afka dowladda ku hadla ka akhriyay bayaanka botafaliiqa, wuxuu isku dayayay in uu dajiyo shacabka isagoo carabaabay in markale sanad gudihiis hadane doorashooyin kale laqaban doono.
kumanaan katirsan ciidamada ka hortaga rabshadaha ayaa waddooyinka magaalada caasimadda ah ee Aljazaa'ir lagusoo daadiyay waxaana la arkayay ciidamada oo kala eryaya dibad baxayaal ubadan arday iyo ururada iskaashatooyinka wadankaasi.
Botafaliiqa oo 82 sana jir ayaa isagoo cuuryaan ah wuxuu kujiraa cisbitaal kuyaal magaalada Jineefa ee wadanka Swezerland kadib markii wax loogasoo qaban waayay isbitaallada wadanka Faransiiska, xaaladiisa caafimaad madegana sidaas oo ay wali wuxuu u oomanyahay in uu talada sii haysto oo uu boobo hantida dadweynaha.
Ururka Alqaacidda ee maqribul islaami ayaa horay ugu baaqay shacabka aljazaa'ir in ay ka dhiidhiyaan nidaamka dabadhilifka ah islamarkaana ay mujaahidiinta ku gacan siiyaan dagaalka lagula jiro dawaaqiidda